प्रोप्रेनोलोल साइड इफेक्ट र अन्तर्क्रियाहरू, र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर प्रेस समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर भारी खेल चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि जानकारी >> प्रोप्रेनोलोल साइड इफेक्ट र अन्तर्क्रियाहरू, र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
प्रोप्रेनोलोल साइड इफेक्ट र अन्तर्क्रियाहरू, र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
प्रोप्रेनोलोल (जेनेरिक इंद्रल) एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि हो जसले उच्च रक्तचापका लक्षणहरू व्यवहार गर्दछ, जस्तै छातीमा दुखाइ। यो औषधि लिनु अघि, बिरामीहरू प्रोप्रेनोलोल साइड इफेक्ट, चेतावनी, र अन्तर्क्रियाको बारेमा सचेत हुनुपर्छ। तल यी साइड इफेक्टबाट कसरी बच्ने सिक्नुहोस्।
प्रोप्रेनोल भनेको के हो?
प्रोप्रेनोल एक सामान्य औषधि हो जुन ब्रान्ड-नामको रूपमा बेचिन्छ Indender LA , Indender XL, InnoPran XL, र Hemangeol। यो बीटा-एड्रेनर्जिक ब्लक गर्ने एजेन्टसँग सम्बन्धित छ (वा बीटा ब्लकरहरू ) ड्रग क्लास, जसले हृदयलाई धडकन सजिलो र कम बलको साथ मद्दत गर्दछ। Propranolol केवल पर्चेको द्वारा उपलब्ध छ। यहाँ केहि स्वास्थ्य शर्तहरू छन् जुन खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) ले अनुमोदित गरेको छ propranolol उपचार गर्न:
एरिथमिया: धेरै अनौंठो मुटुको धडकन जो एकदम ढिलो वा धेरै छिटो छ।
एन्जाइना: छातीमा दुखाइ आउँछ जब रगत मुटुमा राम्रोसँग बगिरहेको हुँदैन।
थरथर हात, अनुहार, भोकल डोरी वा टाउकोको अनैच्छिक र लयबद्ध आन्दोलन।
उच्च रक्तचाप: उच्च रक्तचाप धमनी पर्खालहरूको विरूद्ध रगतको बल धेरै उच्च भएकोले। उच्च रक्तचापको स्तर १ 140०/90 ० भन्दा माथि हो। Propranolol-HCTZ , एक औषधि जो प्रोप्रेनोलोललाई एक मूत्रवर्धकसँग मिल्छ, उच्च रक्तचापको उपचार गर्दछ।
हृदयघात: मुटुमा रगत प्रवाह रोकिएको छ जब एक हृदयघात (मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन) हुन्छ। प्रोप्रेनोलोलले हृदयघातलाई रोक्न र उपचार गर्न मद्दत गर्दछ।
माइग्रेन टाउको दुखाई: माइग्रेनहरू अत्यधिक टाउको दुखाइ हुन् जुन प्रोप्रेनोलले रोक्न मद्दत गर्दछ। अन्वेषकहरूले प्रोप्रानोलोल माइग्रेनहरूको लागि राम्रो भएको विचार गर्छन् किनकि यसले हर्मोन एड्रेनालाईनलाई शरीरमा तनाव प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्नबाट रोक्छ।
शिशु hemangioma: एक सौम्य रक्त वाहिका ट्यूमर जसले months महिनासम्मको बच्चालाई असर गर्न सक्छ।
Propranolol ले अन्य सर्तहरूको उपचार गर्न सक्छ, जस्तै चिन्ता र आतंक आक्रमण , केस आधारमा केसमा। अन्वेषकहरू अन्वेषण गर्दै छन् कि प्रोप्रानोललले केहि प्रकारहरूको उपचार गर्न सक्दछ क्यान्सर । प्रोपे्रानोलको खुराक अवस्थाको आधारमा फरक हुनेछ र १० मिलीग्रामदेखि १ 160० मिलीग्रामसम्म पर्न सक्छ।
सम्बन्धित: इण्डरल एलए के हो? | प्रोपे्रानोल के हो?
प्रोप्रेनोलोलको सामान्य साइड इफेक्टहरू
कुनै पनि औषधिको रूपमा, त्यहाँ सँधै असरको सम्भावना पनि हुन्छ। प्रोप्रानोलोलका केही सामान्य साइड इफेक्टहरू यहाँ छन्:
प्रोप्रेनोलोलको गम्भीर साइड इफेक्टहरू
प्रोप्रानोलल लिदा गम्भीर साइड इफेक्ट हुन सक्छ। प्रोप्रानोलललाई लिने वा लिनेबारे सावधान हुन यहाँ केही गम्भीर र सम्भावित दीर्घकालीन साइड इफेक्टहरू छन्:
चिसो हात वा खुट्टा
तरल पदार्थ प्रतिधारण
रगतमा चिनी परिवर्तन हुन्छ
अनिद्रा र दुःस्वप्नहरू
केही व्यक्ति चिन्तित महसुस गर्छन् कि तिनीहरूको व्यक्तित्व प्रोपे्रानोल लिनबाट परिवर्तन हुनेछ, र यो दुर्लभ भए पनि, यो हुन सक्दछ। प्रोप्रेनोलोल ले मुड परिवर्तन र डिप्रेसन निम्त्याउन सक्छ। यसले मेमोरी समस्याहरू पनि गर्न सक्दछ किनकि यसले नोरेपिनेफ्राइन र इपेनिफ्रिनलाई असर गर्ने तरीकाले, जुन मेमोरी प्रकार्यमा जोडिएको छ। कुनै पनि मुड परिवर्तनहरू सकेसम्म छिटो नै डाक्टरमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
प्रोप्रेनोलोलको साइड इफेक्ट जसलाई तत्काल मेडिकल हेरचाह आवश्यक पर्दछ सास फेर्न समस्या, घरघर्रा, हात वा अनुहारको सूजन, र छाला दाग। यी लक्षणहरूले एलर्जीको स indicate्केत दिन्छ जुन जीवनलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
गम्भीर साइड इफेक्ट देखा परेमा तपाईले प्रोप्रानोल लिन रोक्नु पर्छ, तर मात्र डाक्टरको निर्देशन अनुसार डोज र साइड इफेक्टको आधारमा तपाईका चिकित्सकले बिस्तारै प्रोप्रेनोलोल काट्न चाहानुहुन्छ, संस्थापक र रूबेन एलोविट्ज भन्छन सीईओ को निजी स्वास्थ्य डलास । त्यहाँ अचानक औषधी रोक्नुको साथ सम्भावित परिणामहरू छन् जुन तपाई औषधिमा सुरु गर्नुभयो भन्ने आधारमा।
कसरी थाहा छ यदि योजना बी काम गरीरहेको छ
जे होस् प्रोपेनरोल लिदा साइड इफेक्टमा परिणाम हुन सक्छ, यो अझै पनि एक औषधि हो जसले धेरै राम्रो गर्न सक्छ। यसले मुटुको कार्य गर्न मद्दत गर्दछ, मुटुलाई नोक्सान पुर्‍याउँदैन, र शरीरमा टी सेलहरूको संख्या बढाउँदै रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। त्यहाँ जहिले पनि सबै औषधिहरूको लागि पेशेवर र विपक्षहरू हुन्छन्, र धेरै व्यक्तिको लागि प्रोप्रेनोलोलको फाइदाहरू डाउनसाइड भन्दा बढी हुन्छन्।
प्रोप्रेनोलोल साइड इफेक्ट कहिले सम्म रहन्छ?
प्रोप्रानोललको साइड इफेक्टहरू दिन देखि हप्ता सम्म कहिँ पनि रहन सक्छ। अधिकांश साइड इफेक्टहरू केहि दिनहरूमा टाढा जानेछ किनभने शरीरमा औषधीको समायोजन हुन्छ। अरूहरूको लागि, यो समायोजन अवधि लामो लिन सक्दछ। साइड इफेक्ट खराब वा राम्रो गर्न को लागी खुराक वृद्धि वा घटाउन सक्छ। प्रोप्रेनोलोलको दीर्घकालीन साइड इफेक्टहरू सम्भव छ, तर सबैको लागि यो हुँदैन।
प्रोप्रेनोलोल सबैको लागि होईन। डा। एलोविट्ज वर्णन गर्दछ कि निम्न चिकित्सा सर्तहरूको साथ व्यक्तिले प्रोपे्रानोल लिनु हुँदैन:
ब्राडीकार्डिया (असामान्य ढिलो मुटुको दर)
दम (संकुचित एयरवेजबाट सास फेर्न कठिनाई)
अनियन्त्रित हृदय विफलता (मुटु राम्रो पम्पिंग छैन)
परिधीय संवहनी रोग (रक्त वाहिकामा रोकिएको वा spasming)
मधुमेह (उच्च रगतमा चिनीको स्तरको रोग)
फेच्रोमोसाइटोमा (एड्रेनल ग्रंथि टिश्युको ट्यूमर)
Myasthenia gravis (कमजोर मांसपेशीहरु को रोग)
ओर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन (कम रक्तचाप जो बसिरहँदा वा सुत्नबाट खडा हुँदा हुन्छ)
हाइपरथायरायडिजम (ओभररेटिभ थाइरोइड), रायनाउड रोग, कलेजो रोग, मिर्गौला रोग, फोक्सो रोग, वा मुटु रोग, को साथ बाँचिरहेका व्यक्तिहरूले प्रोपे्रानोल लिनु अघि उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नु पर्छ। यी चिकित्सा अवस्थाहरूले प्रोप्रानोललमा नकारात्मक प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ, जसले थप स्वास्थ्य जटिलताहरू निम्त्याउँछ।
प्रोप्रेनोलोल गर्भवती महिलाहरूको लागि सुरक्षित नहुन सक्छ। प्रोप्रानोललले भ्रुणहरूलाई कसरी असर गर्छ भनेर पुष्टि गर्न पर्याप्त अध्ययनहरू भइसकेका छैनन्, तर अध्ययनले देखाउँदछ कि यो औषधी आमाबाट आमाको दुध मार्फत शिशुमा जान सक्छ। गर्भवती महिलाहरू वा जो गर्भवती हुन सक्दछन् उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनु अघि या अचानक प्रोप्रानोलल बन्द गर्नु भन्दा पहिले।
प्रोप्रेनोलोल कहिलेकाँही बच्चाहरूको लागि शिशु हेमन्गिओमा जस्तो चिकित्सा स्थितिको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि यो प्रत्येक बच्चाको लागि सही औषधि हो। यदि आवश्यक भएमा डाक्टरले बच्चालाई प्रोप्रेनोल मात्र लेख्दछ।
प्रोप्रेनोलोल वयस्कहरूलाई वयस्कहरूलाई होशियारीका साथ सिफारिश गरिएको छ, विशेष गरी यकृत, मिर्गौला, र मुटुको अवस्थाका लागि। केहि अध्ययन सुझाव दिनुहोस् कि er० बर्ष भन्दा बढि वयस्कले उच्च रक्तचापको साथ प्रोपे्रानोल लिनु हुँदैन, तर हृदय विफलता भएका केहि बिरामीहरूलाई यसको आवश्यक हुन सक्छ। डाक्टरहरूले जहिले पनि केस-द्वारा-केस आधारमा प्रोप्रेनोलोल लेख्दछन्।
प्रोप्रेनोलोलको दीर्घकालीन प्रयोग
बीटा अवरोधकको रूपमा, दीर्घकालीन प्रोपे्रानोल प्रयोगले हृदयघातलाई रोक्न सक्छ र स्वस्थ रक्तचापको स्तर कायम राख्न सक्छ। कसैलाई बीटा-ब्लकरहरू लिन धेरै वर्ष सम्म विलक्षण मानिंदैन, विशेष गरी हार्ट अट्याक पछि, तर डाक्टरहरूले सुरू गर्न थालेका छन्। प्रश्न लामो अवधि का उपयोग आवश्यक छ कि छैन।
बीटा-ब्लकरहरूको दीर्घकालीन प्रयोगले सामान्य साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ बिग्रनु । यसले मधुमेह भएका व्यक्तिहरूमा कम रगतमा चिनीका लक्षणहरू पनि मुखौटा गर्न सक्दछ, जुन सम्भावित जीवनलाई जोखिममा पार्न सक्छ। प्रोप्रेनोलोलको उच्च खुराक जुन लामो अवधिमा लिइन्छ हृदयको समस्यालाई अझ विकराल बनाउन र अनियमित मुटुको दरहरूको कारण बनाउन सक्छ।
प्रोपे्रानोल एक औषधि होईन जुन कसैले तुरून्त लिन बन्द गर्न सक्दछ, यदि उनीहरूले साइड इफेक्टको अनुभव गरे पनि। अचानक प्रोप्रानोल रोक्दा हृदयघात र गम्भीर छाती दुखाइ हुन सक्छ। यो हुनबाट जोगाउनको लागि डाक्टरको परामर्श लिनु उत्तम तरिका हो।
सम्बन्धित: कसरी चाँडो र प्राकृतिक रक्तचाप कम गर्ने
जस्तो कि प्रोप्रेनोलोल भनेको सबैजनाले लिनु हुँदैन, यो पनि केहि औषधिहरूको साथ लिनुहुन्न। यी औषधीहरूको साथ प्रोपे्रानोल लिई नकारात्मक अन्तरक्रिया गराउन सक्छ:
अल्फा ब्लकरहरू: प्राजोसिन
अन्य उच्च रक्तचाप औषधिहरू: क्लोनिडाइन , एसबुटोल , nebivolol, डिजोक्सिन , metoprolol
हृदयको अन्य औषधिहरू: क्विनिडाइन , डिजोक्सिन , भेरापामल
स्टेरोइड औषधिहरू: प्रेडनिसोन
Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAIDs): एस्पिरिन , आइबुप्रोफेन
केहि एन्टीडिप्रेससन्टहरू: फ्लुओक्सेटीन , फ्लुभोक्सामिन
औषधीहरूको सूची पूर्ण छैन। स्वास्थ्यसेवा पेशेवरहरूले औषधी अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची प्रदान गर्न सक्दछन्। प्राय भिटामिन र पूरकहरू प्रोप्रानोललसँग लिनको लागि सुरक्षित छन्, तर केहि सेन्ट जोन्स वाउर्ट नहुन सक्छ।
औषधि बाहेक, प्रोप्रेनोलोल रक्सीको साथ सेवन गर्नु हुँदैन। रक्सीले प्रोप्रेनोलोलको रगतको मात्रा बढाउन सक्छ, जसले गर्दा यो असुरक्षित हुन्छ। धेरै क्याफिन पिउनु पनि हुँदैन किनभने क्याफिनले चिन्ता र रक्तचापको स्तर बढाउन सक्छ।
प्रोप्रेनोलोल बनाम प्रोप्रानोलोल ईआर साइड इफेक्टहरू
Propranolol दुई फरक तरीकाहरुमा आउँदछ जुन केहि थोरै बिभिन्न तरीकाले कार्य गर्दछ। नियमित त्वरित रिलीज प्रोप्रेनोलोल प्रभावकारी छ भनेर निश्चित गर्न प्रति दिन धेरै पटक लिनुपर्दछ। प्रोप्रानोलल एक्स्टेन्ड-रिलीज (ER) केवल दिनको एक पटक मात्र लिनु आवश्यक छ किनकि यसले बिस्तारै प्रोप्रानोलल हाइड्रोक्लोराइड शरीरमा निकाल्छ।
प्रोप्रेनोलोल ईआर mg० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, १२० मिलीग्राम, र १ mg० मिलीग्राम क्याप्सूलको रूपमा खरीद गर्न उपलब्ध छ। को मानक खुराक प्रोप्रेनोल ER को प्रति दिन एक पटक per० मिलीग्राम लिन्छ, जुन तत्काल रिलीज प्रोप्रेनोलोलको डोज भन्दा बढी हुन्छ किनकि यो एक पटक मात्र लिइएको हो।
केहि व्यक्ति विस्तारित-रिलिज संस्करण मन पराउँछन् किनकि उनीहरू केवल एक दिनको एक पटक औषधी लिने बारे चिन्तामा छन्। जहाँसम्म, एक डाक्टरले उनीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकता र लक्षणहरूको आधारमा कसैको लागि कुन संस्करण उत्तम हो भनेर निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ।
एक्ट्याभिस एलिजाबेथ प्रोप्रानोलल एक्स्टेन्ड-रिलीजको जेनेरिक संस्करण निर्माण गर्दछ। प्रोप्रेनोलोल एचसीएल ईआरको ब्रान्ड नाम हेमानजेओल हो। औषधिको जेनेरिक संस्करणहरू सामान्यतया ब्रान्ड-नाम संस्करणहरू भन्दा सस्ता हुन्छन्, तर तिनीहरू समान रूपमा काम गर्दछन् र समान रूपमा प्रभावकारी छन्।
नियमित प्रोप्रेनोलोल र प्रोप्रेनोलोल विस्तारित रिलिजका साइड इफेक्टहरू लगभग समान छन्। समान चेतावनी, सावधानी, र प्रोप्रेनोलोलको लागी लागु औषधि अन्तर्क्रिया पनि प्रोप्रेनोलोल ईआरको लागि खडा छ।
प्रोप्रानोलल साइड इफेक्टबाट कसरी बच्ने
प्रोप्रेनोलोल साइड इफेक्टबाट बच्ने उत्तम उपाय भनेको निर्माता निर्देशनहरू र चिकित्सा सल्लाहकारले दिएको कुनै पनि निर्देशनहरूको पालना गर्नु हो।
प्रोप्रेनोलोल डोजी बिरामीको उमेर, व्यक्तिगत लक्षणहरू, र चिकित्सा ईतिहासमा निर्भर गर्दछ, तर मानक खुराक mg० मिलीग्राम प्रति दिन दुई पटक लिन्छ। नियमित त्वरित रिलीज प्रोप्रेनोलोल ट्याब्लेट खाली पेटमा लिनुपर्दछ शरीरमा राम्रो शोषण सुनिश्चित गर्न। प्रोप्रेनोलोल एक्सटेंडेड-रिलीज (ER) ट्याब्लेटहरू खानेकुराको साथ वा बिना लिन सकिन्छ, तर निरन्तर रूपमा लिनुपर्दछ, या त खानाको साथ वा बिना, लगातार खुराकहरू शरीर द्वारा अवशोषित छन् भनेर पक्का गर्न। साथै, खानाको साथ प्रोप्रेनोल ईआर लिई पेट दुखाइ रोक्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ र यी ईआर ट्याब्लेटहरू चर्न वा क्रुश नगर्न सम्झनुहोस् वा सम्पूर्ण डोज एकदम चाँडै अवशोषित हुन सक्छ। Propranolol सामान्यतया बिहान एक पटक र फेरि सुत्ने अघि लिईन्छ, तर यो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको सिफारिसमा आधारित परिवर्तन हुन सक्छ।
प्रोप्रानोलोलको छुटेको खुराकले पनि साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ। याद गरेपछि नै छिटो डोज खानु भएमा यसले साइड इफेक्टलाई घट्न वा बिग्रनबाट बचाउँछ। जे होस्, यदि अर्को डोज लिन लगभग समय लाग्छ भने, बिरामीले छुटेको रकमको लागि अतिरिक्त डोज लिनु हुँदैन।
प्रोप्रेनोलोल कोठाको तापक्रम ताप, प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाश र ठण्डा तापमानबाट टाढा राख्नुपर्दछ। यी वातावरणीय कारकहरूले सम्भावित रूपमा चिकित्सा र यो कसरी काम गर्दछ परिवर्तन गर्न सक्दछन्। ड्रग्स बच्चाहरूको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्। यदि कुनै बच्चाले गल्तिले प्रोपेनरोल लिएको छ भने तत्काल चिकित्सकीय सल्लाह लिनुहोस्।
यदि प्रोप्रेनोलोलको साइड इफेक्ट धेरै गम्भीर छ भने, डाक्टरहरूले फरक औषधि दिन सक्छन्। केवल किनकि कसैले बीटा-ब्लकर जस्तै प्रोप्रानोलल लिन थाल्छ, यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूले यसलाई सँधै लिनुपर्नेछ। औषधिहरू मनपर्दछ ACE अवरोधकर्ताहरू र एआरबीले केहि शर्तहरू व्यवहार गर्दछ जुन बीटा-ब्लकरहरू गर्दछ, र तिनीहरू निश्चित व्यक्तिहरूको लागि राम्रोसँग काम गर्न सक्दछन्। यहाँ केहि सब भन्दा सामान्य रूपमा निर्धारित ACE अवरोधकर्ता र एआरबीहरू छन्:
लेवाक्विन लाई काम गर्न कती समय लाग्छ?
लोटेंसिन (ACE अवरोधकर्ता)
प्रिनिभिल (ACE अवरोधकर्ता)
वासोटेक (ACE अवरोधकर्ता)
एन्टिबायोटिक १०१: तिनीहरू के हुन् र हामीलाई उनीहरू किन चाहिन्छ?
आईयूडी जन्म नियन्त्रणको बारेमा तपाईले के जान्नुपर्दछ
एक डाक्टर नियुक्ति लागत कति छ?
claritin लाई किक गर्न कती समय लाग्छ?
म कसरी मेरो रगत को प्रकार थाहा पाउन सक्छु?
चिन्ता को लागी कुकुरहरु लाई कुन औषधि दिनुहोस्